Virgin Balloon Flights Xeerarka kuubanka
£ 10 Off Booqashada Duulimaadka Faallooyinka Duulimaadyada Balladhka Baalashka. Waxaa jira ku dhawaad ​​2087 qof oo dib u eegay Duulimaadyada Ballooniga ee Virgin. 1944 faallooyin aad u fiican. 34 qof ayaa qiimeeya Duulimaadyada Ballooniga ee Weyn. Iyo 109 macmiil ayaa qiime xun. Trustpilot wuxuu xisaabiyey dhibcaha Duullimaadyada Balloonnada 4.7. Dib -u -eegiddii ugu dambaysay - Waqti aad u cajiib ah ayaa dhammaantood lahaa.
20% Off 2 Amarada Foojarka Kuuboonada Duulimaadyada Balladhka ee Balloonku waxay iftiinka siiyeen duuliye sare Kenneth Karlstrom oo khibrad sare u leh si uu astaanta ugu soo hormariyo ururkiisa. Isla sannadkaas, Ken wuxuu ka faa'iidaystay inuu ku duulo fiisikiskii caanka ahaa ee Stephen Hawking iyo badhkiisii ​​ka wanaagsanaa weel wicker ah oo si aan caadi ahayn loo hagaajiyay.
10% Dhimistii Dhalashada Dhalashada Ku Saabsan Duulimaadyada Ballooniga Bikrada. Duulimaadyada Ballooniga ee Virgin Balloon ayaa kor u qaadayay rakaabka, kor iyo fog muddo ka badan 21 sano. Wali lama duulin? Kaalay ku biir xafladda samada - ka iibso foojarkaaga duulimaadka halkan.